embold - ai yakavakirwa software analytics chikuva
Kuru Kushandisa Michina Embold - An AI Yakavakirwa Software Analytics Platform
Static kodhi yekuongorora ndeye indasitiri-yakajairwa tsika inoshandiswa kubatsira kuwana kushaya simba mukuvaka kunopesana neseti yematanho chirongwa chisati chaitwa. Sezvo mutengo weyakaipa software unokwira, zvese zviri zviviri zvine mutsindo uye zvine mutsigo, static kodhi ongororo ikozvino chikamu chekuvandudza masoftware kumatunhu nemaindasitiri.
Pakave zvakare nekukwakuka kukuru mukutora kweiyo static kodhi kuongororwa pane imwe nhanho, nevakagadziri vachidzidzira kuti ingagone sei kukanganisa hunhu hwebasa, kuchengetedza nguva neimwe nzira inoshandiswa mukugadzirisa zviputi nekuvandudza tarisiro yebasa.
Embold ipuratifomu yekuongorora inomira iyo inopa AI-yakabatsirwa kodhi kuyedza iyo isingori chete inoratidza isina kusimba kodhi uye kushomeka, asi zvakare inoratidza mhinduro dzekugadzirisa iwo.
Chikamu chakanakisa? Unogona kuiwana yakanangana neAKO IDE- kunze kwegore uye on-prem example, Embold inopa mahara plugin yeIntellij IDEA, kuti ugone kuburitsa zvingangoitika mumbugs, kushomeka uye kunhuhwirira kwekodhi muJava, ine ma scanner anokurumidza anokuwanisa iwe mhinduro nekukurumidza paunenge uchigadzirisa kodhi, uchiona kuti unogona kuzvigadzirisa usati waita zvibvumirano.
Iyo Embold analyzer zvakare inopa otomatiki kudhonza zvikumbiro pagore - pese panokumbirwa chikumbiro, muongorori anoongorora mafaira akachinjwa otumira mushumo maererano nenyaya dzaanoratidza akananga kuUI.
Zvinowana zvirinani-iyo Embold Score ficha inobvumira vashandisi kuti vaone huwandu hwese hwekodhi uye vonongedze nzvimbo dzekunongedza kamwechete. Iyo Score inopa empirical chiyero pane kodhi metric, kuumbiridza uye kudzokorora, kodhi nyaya, zvemhando parameter, uye dhizaini uye dhizaini.
Iine rutsigiro rweese akakosha epurogiramu mitauro uye neshanduro yekudzora masisitimu, Embold inogona kubatsira kudzikamisa iyo yekuvandudza nzira mukati mehupenyu hwayo. Iyo analyzer inonyatsoongorora yega yega kodhi kodhi nzira yekuita kuti iyo yese yekuvandudza maitiro ive yakajeka uye yakazara.
Tsvaga zvimwe nezve Embold
sei kudzvanya pane chinongedzo
Apple & apos; s Mamiriro ekunze app anowana nyowani dhizaini uye mamamepu emamiriro ekunze ne iOS 15
OnePlus 3T vs Google Pixel XL vs Samsung Galaxy S7 kumucheto: specs uye saizi kuenzanisa
Lenovo Moto G4 Tamba vs Moto G4 vs Moto G4 Kuenzanisa: ona misiyano yese
Iwe unonyatsoda foni ye5G izvozvi?
Nei Apple yakaburitsa 2020 iPhone SE yakatengwa 'kubva $ 229'? Zvakawanda zvekuda uye zvakanyanya kushandisa ...
LG V10 Ongororo
Akanakisa iPad Pro keyboard makesi (2021)
Samsung Galaxy S6 kumucheto vs Samsung Galaxy S5
Android 11 ichasvika rinhi pafoni yako
Yababa & apos; s Zuva rezvipo gwaro: Tora yako pops chipo che techy